ဆုတောင်းခြင်းသည်ထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိစေသည် 10/05/2011
စံဝင်းချို Daily Hope Prayers Have an Impact
“ဆုတောင်းသမျှသော စကားတို့ကို နားထောင်တော် မူသည်ကိုငါတို့သိလျှင်၊ အထံတော်၌ တောင်းသောဆုတို့ကို ရမည်ဟု သိရကြ၏။ “ (၁ယော ၅း၁၅)
ဆုတောင်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်တွေးမိရဲ့လား? သင်သည်အကြောင်းအရာ တစ်ခုအတွက်ဆုတောင်းနေသည်၊ စာတန်က တိုးတိုးလာပြောသည်မှာ “ဒီဟာသည်အချိန်ဖြုန်း နေခြင်း ဖြစ်သည်၊ မေ့ပြစ်ပါ။ မင်းကိုမင်းမည်သူထင်သနည်း? မင်းဘာလုပ်နေတယ်ထင်သလဲ? ဘုရားသခင်က နားထောင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ သင့်အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနှင့်။”
ဆုတောင်းခြင်းသည် အလုပ်လုပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင် ထိန်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းသောတန်ခိုးကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာများ၏အခြေခံသည်၊ ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာဖြစ် သည်။ သူဘာကြောင့်တစ်ခုဘဲလုပ်၍အခြားတစ်ခုမလုပ်သလဲ? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘုရားသခင်သည် ထိန်းချုပ်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အသိပညာနှင့်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကိုယုံကြည်မှု ရှိကြရမည်။
ဧဖက် ၃း၂၀ ကပြောသည်မှာ “ငါတို့၌ ပြုပြင်သော တန်ခိုးတော်အတိုင်း၊ ငါတို့တောင်း ပန်ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာ ပြုခြင်းငှါတတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊”
ဆုတောင်းခြင်းသည်၊ ဘုရားသခင်လုပ်ပေးနှိုင်သည်များဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ပစ္စည်းများသည် သင်တို့ အတွက်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အကြိမ် နှစ်ဆယ်ပါသည်။ “တောင်း” အားပေးတိုက်တွန်းသည်မှာ သိထားကြရန် အရာဝတ္တုများသည်သင်ထိန်းသိမ်းမရပါသော်လည်း ဘုရားသခင်သည်အားလုံးကိုထိန်ချုပ်ထား နိုင်သည်။ ကျွန်တော်သည်အခြေအနေကိုမပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်တော်သည်ဆုတောင်း၍ ဘုရားသခင်သည်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။
Tuesday May 10, 2011 12:00AM Posted by Rick Warren